Xiddig Pierre-Emerick Aubameyang Sida Weyna Loola Xiriirinayo Kooxaha Arsenal,Chelsea & Liverpool Oo La Ogaday Koox Uu Lacag Waali Ah Ugu Biirayo – Kooxda.com
Home 2018 January Jarmalka, Wararka Maanta Xiddig Pierre-Emerick Aubameyang Sida Weyna Loola Xiriirinayo Kooxaha Arsenal,Chelsea & Liverpool Oo La Ogaday Koox Uu Lacag Waali Ah Ugu Biirayo
Xiddig Pierre-Emerick Aubameyang Sida Weyna Loola Xiriirinayo Kooxaha Arsenal,Chelsea & Liverpool Oo La Ogaday Koox Uu Lacag Waali Ah Ugu Biirayo
Xiddiga weerarka uga ciyaara kooxda Borussia Dortmund ee Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lagu soo waramayaa in uu heshiis waali ah uga tagi doono kooxda reer Germany sida ay sheegayaan wararka haatan soo baxaya.
Pierre-Emerick Aubameyang ayaa lagu soo waramayaa in uu ku dhaw yahay in uu lacag dhan 64 milayn oo euro ugu biiro kooxda reer china ee Guangzhou Evergrande marka uu dhamaado xilli ciyaareedkan.
Sinaia.com ayaa sheegtay in xiddiga Borussia Dortmund uu noqon doono magaca ugu dambeeya ee ugu weyn ee u dhaqaaqa Bariga Dhexe.
Si kastaba ha ahaatee, agaasimaha isboortiga Dortmund Michael Zorc ayaa u dhaqaaqay inuu diido wararka xanta ah.
Aubameyang ayaa si aad ah loola xiriirinayaa kooxaha Arsenal iyo Liverpool ee horyaalka Premier League iyo Atletico Madrid ee horyaalka La Liga.
Diego Costa ayaa ku soo laabtay kooxdiisii ​​hore isagoo u muuqda inuu soo gabagabeyn doono wararka Aubameyang la xiriirinaya Atletico inkasta oo Costa kaarka cas loo taagay kulankiisii ugu horeeyay ee La Liga tan iyo markii uus oo laabtay.
Dhanka Kale Tababaraha kooxda Arsenal Arsene Wenger ayaa iska fogeeyay in uu u dhaqaaqi doono saxiixay weeraryahanka reer Gabon.
Waxaa la sheegayaa in Aubameyang uu ka tagi doono Bundesliga xagaaga inkastoo aan la ogeyn ilaa inta uu qandaraaska noqonayo ama mushaharka uu filanayo.